आज भदौ ३० गते बुधबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नु-होस् दैनिक राशिफल ! !
क्रोधलाई नियन्त्रण गर्नुहोला अन्यथा काममा समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । मानसिक रुपमा उदासी हुनु हुनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । कुनै धार्मिक कार्य तथा मांगलिक कार्य सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ।
शारीरिक रुपमा अस्वस्थ हुनुको कारण कार्य सम्पादनमा ढिलाई हुनेछ । कुनै पनि नायाँ कार्य थालनी गर्नको लागि उचित रहेको छैन । खान पानमा विशेष ध्यान दिनुहोला । कामको चाप बढ्ने छ । यात्रामा बाधा हुनेछ । शारीरिक आलस्यताको अनुभव हुनेछ।
दिन आनन्दमय हुनेछ । शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ अनुभव गर्नुहुनेछ । आफन्त तथा परिवारक सदस्यसँग रामाइलो यात्रा हुनेछ । साथै स्वादिष्ट भोजन हुनेछ । वाहन शुख मिल्नेछ । मान सम्मान बढ्ने यिगा रहेको छ ।
व्यापार व्यवसायमा लाभ हुनेछ । कर्लायामा सहकर्मीको सहयोग मिल्नेछ । परिवारमा सान्त तथा सुखी वातावरण हुनेछ । शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ अनुभव गर्नु हुनेछ । प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्न सकिनेछ। खर्च अधिक हुनसक्छ ।
कलात्मक प्रदर्शन गर्नको लागि उचित समय रहेको छ । विद्यार्थीहरु उत्कृस्ट प्रदर्शन गर्न सक्षम् हुनेछन् । आफन्तसँग भेट हुनेछ। शारीरिक स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । क्रोधलाई नियन्त्रण राख्नु होला । अन्यथा मन उदास हुनेछ । दिन प्रतिकुल हुनेछ । शारीरिक तथा मानिसकी रुपम स्फूर्ति बढ्नेछ । पत्नी सँगको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ । आमाको स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । स्वास्थ्य उपचारमा धन खर्च हुनेछ । सन्तानको सहयोग मिल्नेछ ।
प्रतियोगी हरुलाई पराजित गर्न सकिनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । कलात्मक प्रदर्शन गर्ने समय रहेकोछ । व्यापार व्यवसायमा लाभ हुनेछ । धार्मिक स्थलको भ्रमण हुनेछ । सन्तान चिन्ता बढ्नेछ ।
परिवारमा विवाद हुन नदिन बोलीमा संयमता अपनाउनु होला । बिगतको कुराले मनमा चोट पुग्न सक्छ । मनमा नकारात्मक बिचार पैदा हुन सक्छ। स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । मनमा पछुतो हुनेछ । अध्यनमा मन जाने छैन।
सोचेको काम पुरा हुनेछ । लक्ष्मीको कृपा रहनेछ । शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थताको कारण मन प्रसन्न हुनेछ । कतै धार्मिक स्थलको भ्रमण हुनेछ । आफन्तहरुसँगको भेटघाटले मन प्रसन्न रहनेछ। आफन्तबाट शुभ समाचार मिल्नेछ ।
मन स्थिर हुने छैन । धार्मिक र सामाजिक कार्यमा धन खर्च हुनेछ । आफन्त तथा साथि भाइसँग विवाद हुनेछ । धन हानी तथा मान हानिको सम्भावना रहेको छ । बोलीमा संयमता अपनाउनु होला ।
नयाँ कार्यको थालानी शुभ सावित हुनेछ । व्यापार तथा व्यवसाय गर्नेको लागि लाभको सम्भावना रहेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा मान सम्मान बढ्नेछ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । आमाबाट शुभ समाचार मिल्नेछ । रामाइलो यात्राको आयोजन हुनेछ ।
व्यपार व्यसायमा लाभ हुनेछ । कार्य सफलताको कारण उच्च अधिकारी प्रसन्न हुनेछन् । कार्य क्षेत्रमा पद बढ्ने सम्भावना रहेको छ । बाबुबाट लाभ हुनेछ । पारिवारिक वातावरण रमाइलो हुनेछ। मान प्रतिष्ठा बढ्ने छ ।
२०७८ भाद्र ३०, बुधबार प्रकाशित 1 Minute 235 Views